Mamorona Cyber ​​Café tsy andoavam-bola amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Mamorona Cyber ​​Café tsy andoavam-bola miaraka amin'ny GNU / Linux
Fotoana vitsy lasa izay dia tonga tamiko io fanontaniana io, raha toa ka misy zavatra toa io azo atao. Androany nitetezako ary azoko indray ny fisalasalana ary nanomboka nanadihady bebe kokoa aho.
Inona no tadiaviko?
Mila Cyber ​​Café aho, miasa tanteraka. miaraka amin'ny Rindrambaiko Maimaimpoana
Ok, andao hiasa ..
Ny zavatra voalohany tokony hoeritreretintsika dia ny Operating System. Satria eo no hiasantsika.
Manolotra anao CyberLinux 1.4 «Pampa» aho
Fitsinjarana miorina amin'ny Ubuntu 12.04 LTS ary namboarina hitovy Windows. Miaraka amin'ny tanjona fa tsy hahatsapa ho voalavo laboratoara ireo olona miditra amin'ny cyber. Ny mampiavaka an'io fizarana io dia:
Miorina amin'ny Ubuntu 12.04 LTS
"Mpampiasa" miaraka amin'ny autologin sy root permissions (sudo)
mpampiasa "Admin" miaraka amin'ny alalana faka (sudo)
Ny "root" an'ny mpampiasa dia tsy mandeha.
Lightdm ho mpitantana fanombohana.
VNC tsy misy teny miafina amin'ny fidirana "mpampiasa" (/usr/bin/vnc.sh).
CBM (slavolinux) miaraka amin'ny alalana faka ho an'ny "mpampiasa" (sudo NOPASSWD).
Fampandehanana rakitra linux (/ usr / bin / cbm).
Gnome3 miaraka amin'ny fomba gnome mahazatra (gnome-fallback).
Chrome ho toy ny mpitety tranonkala tokana (sy mpanohana tselatra).
Sary masina Faenza
Ny sasany amin'ireo rindranasa napetraka: emesene, chrome, libreoffice, vlc, sahisahy ratsy, fahasahisahiana, skype 4, 4kvideodownloader, 4kvideotomp3, fakantsary, gimp 2.8, mypaint, remmina, varatra, divay, ares ho an'ny linux, pidgin, winff, nerolinux sy ny hafa ..
Eto ianao dia afaka mahita horonantsary:.
Ary azonao sintonina avy amin'ity rohy ity:
Sintomy ny CyberLinux MD5
Ao amin'ny pejy ofisialy dia manao izao fampitandremana manaraka izao izy ireo.
TECNICOSLINUX dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezan'ny data, noho ny fampiasana diso ny fametrahana CIBERLINUX, satria fizarana natao hametrahana solosaina tsy misy rafitra fandidiana izany.
Ankehitriny? Ahoana no fomba hifehezana ny solosaina?
Fifehezana CYBER vaovao "NCC"
NCC Izy io dia miaraka amin'ny mpandrindra mpanjifa natao ho an'ny cafe cyber miorina amin'ny Uwimbux Cyber ​​Linux eo ambanin'ny lisansa GPL izay manana ireto manaraka ireto.
Database ho an'ny vokatra
Manampia fotoana na vola tsy misy fanelingelenana ataon'ny mpanjifa
Kitapo solosaina mpanjifa
Kaonty mandeha ho azy amin'ny fotoana fanangonana.
Fampandrenesana momba ny fandaniambolan'ny mpanjifa.
Manatanteraka baiko terminal amin'ny PC client anao avy amin'ny mpizara.
Fampiasana sary masina Faenza.
Raha te hampiasa azy dia alao ny TAR, esory izy ary ho hitanao ny fisie .deb roa. Mila mametraka azy ireo fotsiny amin'ny Server sy amin'ny client araka izay sahaza azy ianao ary dia izay.
Sintomy ny NCC avy amin'ny MediaFire
Ahoana ny huh? Na izany aza. Raha tianao dia azonao atao ny mamorona mpampiasa ao amin'ny folder / tmp / hamafana ireo fisie alaina sy fanovana rehetra mety ho nataon'ireo olona mandeha amin'ny cyber anao isaky ny manomboka indray.
Eny .. Mipetraka any Medellín, Colombia aho ary manana solosaina tranainy vitsivitsy ao an-trano. Mieritreritra ny hanao an'io aho fa tsy manana ny toerana hahitana azy ireo. Raha misy manana sosokevitra ..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Mamorona Cyber ​​Café tsy andoavam-bola miaraka amin'ny GNU / Linux
Enga anie ny admin sasany manamboatra ny bokotra NCC misintona .. Mivoaka toy izao. [Sintomy url = »http://www.mediafire.com/?0rham2bbegydjb2 ″ label =» Sintomy ny NCC avy amin'ny MediaFire »]
Ao amin'io ISO io ihany ve no nahatonga azy ho an'ny pc server?
Taloha lasa izay dia nisy OS antsoina hoe cyber café, heveriko fa najanona izany, saingy tamin'ireo andrana nataon'ny mpandraharaha ireo dia ReactOS ihany no nijanona, miaraka amin'ireo fitaovana WinXP rehetra, tsara fa misy vahaolana ho an'ity karazana orinasa ity. mahafaly
Jaume dia hoy izy:
Lahatsoratra mahaliana, fa tsy maintsy manavaka ny "COST" sy ny "COST" ...
Mamaly an'i Jaume
Misy ifandraisany amin'ny toerana nampiasana azy. Eto Kolombia ny teny hoe "vidiny" dia saika tsy nampiasaina mihitsy, na raha ampiasaina dia mitovy dika amin'ny "vidiny" (fandaniana mifandraika amin'ny asa aman-draharahan'ny orinasa ara-toekarena, ohatra ny akora). Ny tsy itovizany dia ny fiheverana ny "expenditure" (tsy misy ifandraisany mivantana amin'ny hetsika asa, ohatra ny asam-panjakana).
Sendra ny zava-misy fa mamoaka zavatra momba ny cybercafe fotsiny izy ireo:
Saingy eto amin'ity tranonkala ity dia miresaka momba ny programa fitantanan-draharaha izy ireo fa tsy distro ...
Mamaly an'i adrian
Izy ireo no mpamorona izany fizarana izany. Mazava ho azy fa hisy ny lahatsoratra aloha fa tsy any amin'ny toeran-kafa ... ary izy ireo dia nanao lahatsoratra isaky ny kinovan'ny fizarana.
Ciberlinux 1.4 Pampa .. Distro Arzantina ..
Saingy mbola mifikitra amin'ny SevenOS aho .. miorina amin'ny Ubuntu 10.04 LTS: http://www.taringa.net/posts/linux/6794076/Seven-OS-10_04-LTS.html
izkalotl dia hoy izy:
Mino aho fa ny GNU / Linux no tokony ho izy fa tsy tokony hanahaka ny hafa, mazava ho azy fa mizara karazany ny tsiro ary malalaka ny tsirairay mieritreritra izay heveriny fa mety indrindra.
Manana kafe Internet aho izay itondran'ny pc an'i Debian ankehitriny - GNU / Linux (Ubuntu taloha) ary afaka milaza aminao am-pireharehana aho fa miasa 100% izany ho an'ny hetsika rehetra natao tao amin'ny kafe Internet, raha misy mila antontan-taratasy momba ny fampiharana ny ny raharahan'ity lehilahy ity miaraka amin'i Debian na Ubuntu miaraka amin'ny fahafinaretana dia ampitaiko aminao ny angona.
Mamaly an'i izkalotl
Tsara, efa henoko izany nandritra ny fotoana fohy, hitako aza ny momba ilay antsoina hoe Loculinux hafa ho an'ny tranoheva / cybercafé.
yay dia hoy izy:
Tsy zava-baovao na tantara vaovao, efa ela aho no nanana Linux Debian stable namboarina sy mandeha amin'ny cyber, mazava ho azy miaraka amin'ny "CBM" ary na dia Frezador aza. Raha tokony ho ny Lightdm dia ampiasaiko Xfce 4.6, dia fantatry ny be sy ny maro ireo programa hafa. Ho an'ny freezar dia mampiasa ny "Lethe", spacer tsara ho an'ny linux natao tao amin'ny University of Silver Argentina ( http://lihuen.info.unlp.edu.ar/index.php?title=Proyectos ).
Valio i ybueee
miniminiyo dia hoy izy:
Tena tsara, indray mandeha aho nahita ohatra iray hafa niaraka tamin'ny Zorin OS sy distros ny karazany, saingy ity iray ity dia tena miorina amin'ny cyber, fanontaniana mahaliana rehefa mivoaka ho an'ny linux daholo ny Steam.
Mamaly an'i miniminiyo
lahatsoratra tsara, tsy misy ifandraisany izany, fa mahatsiravina ny mozikan'ilay horonantsary
Manana linux mint 13 mate ampiharina ao amin'ny booth findaiko aho, miaraka amin'ny cbm, tsy misy sarotra ampiendrehana, ao amin'ny pejy cbm, nohazavaina ny zava-drehetra, na dia ny vao manomboka aza no mametraka azy, tsy mila ampidiriko ity linux pampa ity, tsy zava-baovao izany. 🙂
Tsara! izay ilaiko fotsiny amin'ny cyber-cafe keliko, manantena aho fa tsy hijanona toy ny andrana hafa.
ny mpanjifa dia mifanaraka tsara kokoa amin'ny famaritana azy ireo ny olana dia ny antontan-taratasy mifanaraka amin'ny libreoffice ary mahazo fitoviana amin'ny Moffice (IZAO NO OLANA IHANY) ny biraon'ny kingoft dia amin'ny teny anglisy (tsy manana amin'ny Espaniôla ianao) 😀
Rafael Virgilio Taveras Hidalgo dia hoy izy:
Novolavolako tamin'ny java + MySQL, azoko atao ny mandefa azy maimaim-poana, afaka mifampiresaka amin'ny fantsona mitovy amin'ilay video ianao ... veloma https://www.youtube.com/watch?v=qON4NS5h5CI&t=69s
Valiny tamin'i Rafael Virgilio Taveras Hidalgo
Edward akoa dia hoy izy:
Ho an'ireo maniry ny hanao cyber café amin'ny Ubuntu na Linux, ny vahaolana tsara indrindra dia ny camerubuntu-hotspot, izay rafitra miasa maimaimpoana natokana ho an'ny cybercafé ary ahafahanao manao cybercafé anao ao anatin'ny 15 minitra. Ny solosaina mpanjifa dia afaka mihazakazaka amin'ny rafitra fiasa (Linux, Windows, Macos na Android), afaka mamela fifandraisana Wi-Fi amin'ny telefaona, takelaka ary solosaina finday koa izy.
Raha mila tsipiriany misimisy kokoa, araho ireto horonan-tsary ireto:
Raha te haka, araho ireto rohy ireto:
Mamaly an'i EdwardAkoa
Iza no te hifehy ny Internet?
Fanavaozana Tango ho an'ny Android sy iOS